Goodax: Raysul Wasaare Cumar C/rashiib ayaan xoreyneynaa! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Goodax: Raysul Wasaare Cumar C/rashiib ayaan xoreyneynaa!
17th January 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Soomaaliya, C/llaahi Goodax Barre oo laga reebay Liiska Golaha Wasiirada RW Cumar C/rashiid ayaa ka mid noqday mucaaradka ugu adag ee ka horjeeda xukuumadda fashilntay, ee lagala cabsaday baarlamaanka.
Goodax oo ka mid Kutlada Baarlamaanka ee mucaaridka ku noqday xukuumadda RW Cumar ayaa sheegay in iyagoo sugaya in isbadel muhiim ah la sameeyo la soo dhisay xukuumadda Umadda Soomaaliyee la niyad jabtay oo ay ku jiraan dad fashilmay.
C/llaahi Goodax Barre ayaa sheegay in RW Soomaaliya uu hoosta u galay koox gaar ah sida uu yiri, wuxuuna ku dooday iney xoreynayaan.
“RW wuxuu qaatay talada koox gaar ah, waxaana dooneynaa inaan ka xoreyno” ayuu wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha C/llaahi Goodax Barre.
Goodax ayaa wacad ku maray in xukuumadda lasoo 12-kii bishaan aysan ka gudbi doonin baarlamaanka, inkastoo markarkaasi sheegay kadib RW Cumar go’aansaday inuu wax ka badel ku sameeyo xukuumadda cusub.
Goodax ayaa ka mid ah wasiiradii ku baaqay inuu xilka ka dego RW hore C/weli Sheekh Axmed Maxamed, waxaana markii uu iska waayey golaha cusub uu noqday mucaarid.
Xukuumaddii muranka dhalisay oo lagala cabsaday baarlamanka & fashil bilowday
Fowsiyo Yuusuf: Ma dhici doonto in xildhibaan dambe lagu sasabo laaluush!